Kulan lagu taageerayo hannaanka axsaabta siyaasadeed iyo furashada ururada oo maanta Bossaso ka dhacay. – Radio Daljir
Kulan lagu taageerayo hannaanka axsaabta siyaasadeed iyo furashada ururada oo maanta Bossaso ka dhacay.
Nofeembar 25, 2012 12:37 g 0
Bossaso, Nov 25 – Magaalada Bossaso maanta oo (Axad ah), waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo ay ka qaybgaleen madax badan oo ka tirsan maamulka Puntland siiba kuwa gobolka Bari, ururrada haween, dhallinta iyo qaybo kale oo bulsho.
Kulankaasi oo saacado badan soconayey, waxaa lagu taageerayey hannaanka axsaabta badan ee haatan Puntland ay hayaanka u sii tahay, kaasoo ah qorshe lagu talo jiro xilli doorashada soo aaddan dalka in uu ka saanqaado.
Dadkii ka qaybgalay kulankaasi oo madax maamulka ka tirsanna ay ka mid ahaayeen, waxaa la isku tusaaaleeyey baahido maanta loo qabo barnaamij dimuqraadiyadeed oo looga gudbayo habka qabaliga ah ee mas’uuliyiinta wakhtigaani ay ku yimaadaan.
Waxaa sidoo kale isla shirkaasi lagu soo dhaweeyey urur-siyaasadeedkii M/weynaha Puntland oo ku dhawaaqay ee Horseed, kaasoo ah dhawaan M/weynuhu ka shaaciyey munaasabad lagu qabtay Garowe.
Puntland, ayaa bartamahihii sannadkaan meelmarisay dastuur oganaalaya furashada axsaabta siyaasadeed, kaasoo dadka reer Puntland uga gudbayaan habkii qabiilka ku qotamay, hase ahaatee waxaa jirta is maandhaafsanaan ka oogan xilliga dhaqangalkiisa.
Puntland: Waan ka hortegaynaa doorashooyinka Somaliland ee Sanaag & Hayland (Dhegayso).
Caawa iyo Daljir_Axad Nov 25-2012, Cabdifataax Cumar Geeddi ‘_ Nairobi Kenya